SomaliTalk.com » 2009 » August » 08
Home » Archive Maalinta August 8th, 2009
Minneapolis Somali Book Fair
Book Fair Announcement The Somali Culture, Language & Literary Study Circle & Scansom Publishers Presents: Minneapolis Somali Book Fair Click here Read More →
Sh. Shariif oo ka gows qabsaday go’aankii Baarlamaanka
August 07,2009 ayaa Madaxwaynaha DFKS Mudane: Sheekh Shariif Sh. Axmed wuxuu waraysi kusiiyey Magaalada Nairobi Wariyaha idaacada British Broadcasting Corporation (BBC) Abdirizak Haji Atosh, waraysigaas oo dheeraa ayaa waxaa ka mid ahaa in wax laga waydiiyey Heshiiskii Badda ee dhexmaray Soomaaliya iyo Kenya ee loogu yeeray ama loo yaqaan Is-afgarad. Marka laga yimaado shakiga iyo walaaca Saxaafadda...
“Journalism can never be silent: that is its greatest virtue and its greatest fault. It must speak, and speak immediately, while the echoes of wonder, the claims of triumph and the signs of horror are still in the air.” Henry A Grunwald Recently on a cold morning walking in university of Pretoria’s campus to attend a public interest lecture about human rights violation with reference...
Ma adigaa Saxafi ah!?|Zaki
Qof waliba wuxuu doonayaa ugu yaraan inay jecelyihiin dadka ku nool hareerihiisa, markaad tahay saxafi waxaad doonaysaa inaad bulshada usoo gubdinaysaa warar iyo qoraallo iyo maqaallo xiisa galiya akhristaha. Wariyuhu mahan qof ka shaqeeya Xafiis Xariir Caalamiga (علاقات العامة ) sidaa awgeed maahan qof mar walba udhoola caddeeya bulshada ku xeeran ama xariirka la leh qoraaladiisa, waxaan...
Halkudheg: somalitalk 1999-2009
Sawiro dheeraad ah eeg halkan Madaxweynaha Dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sh. Axmed ayaa galabta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho isagoo ka soo kicitimay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya oo uu kulamo kula soo qaatay xubno ay ka mid aheyd Xog-hayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mrs. Clinton. Madaxweynaha ayaa waxaa garoonka Aadan Cabdulle International ku soo dhoweeyey R/wasaaraha...
Qiso Cajiib ah oo dhex martay Cumar Binu Khadaab iyo Qoys iska dhibanaa Habeen habeenada ka mid ah ayaa waxaa dhacday inuu Amiirkii Muslimiita ee wakhtigaas, Cumar Ibn Khattab (ilaahay ha ka raali noqdee) oo dhex qaadayay xaafadaha Madinal Munawarrah si uu ogaado dareenka iyo dhibtaada dadkiisa. Kadib wuxuu maqlay oohin, markaas ayuu ku leexday gurigii ay kasoo baxaysay oohinta. Markaas ayuu arkay...